Ampidino ny fampiharana TwinStrangers ho an'ny Android [2022 farany]
Te-hahita ny doppelganger anao eto amin'ity izao tontolo izao ity ve ianao? Raha eny dia tokony hanandrana ny TwinStrangers App ianao. Izy io dia rindranasa Android, izay manolotra ny mpampiasa hahita olona mitovy aminy eran'izao tontolo izao. Afaka mahita ny doppelganger eo noho eo eo amin'ity sehatra ity ianao ary mizara ny zavatra niainanao.
Fantatrao fa misy olona mihoatra ny 7.674 miliara erak'izao tontolo izao. Noho izany, misy ny olona izay mitovy endrika amin'ny tsirairay. Noho izany, misy ny mety ny doppelganger, izay midika hoe 'mpandeha an-tongotra roa'. Ka vonona ve ianao hahita ny kambana aminao, hametraka ity fampiharana ity amin'ny fitaovanao sy hizaha izany rehetra izany?
Inona ny atao hoe TwinStrangers App?
TwinStrangers App dia fampiharana Android, izay manolotra ny mpampiasa hahita ny mitovy aminy eran'izao tontolo izao. Hahita olona mitovy aminao avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao ianao, izay mbola tsy nihaona taminao ary mankafy ny fikarohana. Misy ny sasany amin'ireo endri-javatra tsara indrindra ho an'ny mpampiasa, izay tsy mitaky fiampangana.
Noho izany, hanomboka amin'ny interface amin'ity rindrambaiko ity isika, izay azon'ny mpampiasa ampiasaina. Ny fiasa sy serivisy rehetra misy dia voafaritra tsotra fotsiny ho an'ireo mpampiasa. Manome ny teny anglisy ho an'ireo mpampiasa izy io, izay azo ovaina ho hafa ihany koa araka ny fanjakana.
Ny fisoratana anarana dia takiana amin'ny fidirana amin'ny serivisy rehetra misy. Ny fizotran'ny fisoratana anarana dia mora sy tsotra ho an'ireo mpampiasa. Mila manome fampahalalana manokana ianao mba hidirana amin'ireo endri-javatra, izay misy ny anarana, ny anarana azo antoka, ny mailaka, ny miralenta ary ny sary.
Ny fampahalalana rehetra dia takiana amin'ny mpampiasa mba hidirana amin'ny serivisy rehetra, fa ny ampahany manan-danja indrindra dia ny sary. Ny sary tsy maintsy ampiana dia tokony ho marina, izay mitaky ny tarehinao tsy misy fatotra na lafiny lafiny. Ny sarinao dia tokony ho tonga lafatra, izay manamora ny mpampiasa hahita azy mitovy.
Rehefa vita ny fizotry ny fisoratana anarana dia hahazo ny votoaty fampahafantarana rehetra avy amin'ny TwinStrangers Download. Hahazo fampandrenesana momba ny fitadiavana vaovao mitovy amin'ity sehatra ity ny mpampiasa. Azonao atao mora foana ny mahita sy mizara ny mombamomba anao rehetra amin'izy ireo.
Raha te hahita ianao fa mitovy, dia io no iray amin'ireo sehatra tsara indrindra hahafahanao mamita ny nofinao. Azonao atao ny mifandray amin'ilay olona iray hafa ary mizara ny fahalalanao sy ny zavatra niainanao amin'izy ireo. Afaka mankafy ny fiasa sy serivisy tsara indrindra ianao.
Misy endri-javatra mahavariana misy taonina hita ao amin'ity fampiharana ity ho anao, izay azonao zahana ao. Noho izany, sintomy ny TwinStrangers For Android ary zahao izany rehetra izany. Raha te-hahita fampiharana mifandraika bebe kokoa ianao dia tsidiho ny anay tranonkala.
Amin'ny maha-zavatra niainanao manokana dia sehatra azo antoka sy miasa izy io, saingy tsy izahay no mpamorona an'ity fampiharana ity. Noho izany, tsy afaka manome antoka momba izany izahay. Afaka mampiasa adiresy mailaka sandoka ianao hahazoana ny serivisy hanandrana, alohan'ny hampiasana ny kaonty ofisialinao. Azonao atao ny manandrana ireo fiasa sy serivisy rehetra misy amin'ny kaonty sandoka.
Anaran'ny fonosana com.twinstrangers
Ahoana ny fampidinana ny TwinStrangers Apk?
Raha te hampidina ity rindranasa ity ianao dia afaka mahita mora foana ny bokotra fampidinana eto amin'ity pejy ity. Hizara ny kinova farany an'ity fampiharana ity izahay. Tsindrio fotsiny ny bokotra fampidinana, izay misy eo an-tampon'ny sy ity pejy ity. Hanomboka ny fisintomana rehefa vita ny paompy.
Tsotra ny fizotry ny fametrahana azy, fa azonao atao ny manaraka ny dingana fametrahana ny rindranasa amin'ny fitaovanao. Mandehana any amin'ny Settings sy Open Security Panel, avy eo checkmark 'Source tsy fantatra'. Raha vantany vao vita ity dingana ity, afaka mandefa azy amin'ny fitaovana Android ianao.
Finder mitovy indrindra
Fomba fisoratana anarana eo noho eo
Fomba fitadiavana haingana
TwinStrangers App no ​​fampiharana Android tsara indrindra hanandraman'ny olona zava-baovao. Ny olona dia afaka mahita ny olona mitovy aminy erak'izao tontolo izao ary mankafy. Noho izany, raha te-hahita olon-kafa mitovy endrika aminao ianao, dia raiso ity app ity ary zahao izany rehetra izany.
Sokajy Apps, Lifestyle Tags TwinStrangers Apk, App TwinStrangers, TwinStrangers Download, TwinStrangers Ho an'ny Android Post Fikarohana
Xollu Apk Download ho an'ny Android [2022 Update]